Migraine Headaches (ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်ခြင်း) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Migraine Headaches (ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်ခြင်း)
Migraine Headaches (ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်ခြင်း) ကဘာလဲ။
• စိတ်ခံစားမှု ပြောင်းလဲခြင်း၊ ဥပမာ- စိတ်ဓါတ်ကျခြင်း
• ဦးနှောက်ရှိ ဓါတုဓါတ် ပစ္စည်းများ မမျှတမှု ။ ဥပမာ serotonin ( အာရုံကြောစနစ်တွင် နာကျင်မှုကို ထိန်းချုပ်ရန် ကူညီပေးသော ဓါတုပစ္စည်းတစ်မျိုး)
Migraine Headaches. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/migraine-headache/basics/definition/con-20026358 Accessed Jul 15 2016
Migraine Headaches. https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000709.htm Accessed Jul 15 2016